Warbixin ku saabsan barakacayaasha - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Warbixin ku saabsan barakacayaasha
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 27 Febraayo, 2013, 13:49 GMT 16:49 SGA
waxaa jira qoysas badan oo ku jira xeryo, kuwaasi oo ay saameeyeen rabshadihii dalka ka dacay shan sano ka hor. Waxaa ka mid ah goobaha ay saameysay magaalada Eldoret.
Goobo ay deggan yihiin dadka ku barakacay Kenya
Boqolaal Qoys ayaa wali kujira xeryaha barakacayaasha ee gobolka Rift Valley ee wadanka Kenya, halkaas oo ay ku noolaayeen ku dhawaad 5 sano kadib rabshadihii doorashadii lagu murmay ee dalka.
Inkastoo dowlada Kenya ay balan qaaday in ay dib u dajin u sameyso dhamaan barakacayaasha ka hor doorashada guud, ayaa waxaa wali jira saddex xero oo ku yaal magaalada Eldoret oo ay ku hoydaan ilaa 1000 qoys - Eldoret waxa ay ka mid aheyd meelaha sida weyn ay u saameeyeen qalalaasihii 2008-dii. Sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Abdifitah Ibrahim Cagayare oo dhawaan booqday qaar ka mid ah xeryaha Barakacayaasha, qaar badan oo ka mid ah qoysaska barakacay ayaa waxa ay ku nool yihiin xaalad addag.
Waa arooryo hore, oo qoraxda ayaa madaxa lasoo baxayso, xerada barakacayaasha ee Yamumbi, ku dhawaad 15 haween ah ayaa waxa ay ku howlan yihiin howl maalmeedkoodii caadiga ahaa. Meel ka mid ah xerada haweeneey ayaa waxa ay dhaqeysaa dhar.
Waxaa ku xigo haweeneey kale oo shaah ku karsaneysa jiko laga sameeyay geedo iyo cooshado.
Waxa ay halkan xerada baracakayaasha ay ku dhashay 2 caruur ah. Aabaheed iyo walaasheed ayeey ku waysay isku dhacyadii doorashada. Ilaa iyo iminkana ma ay oga waxa ku dhacay ninkeedii oo la waayay xilligii doorashada. Waxay noo sheegtay inay rajaynayso inay dib ugu laabato beertii iyo gurigeedii ay mudo 5 sano ah ay moogeyd, oo ay indhaheena nagu soo tusto.
Inkastoo ay markii hore doonaysay inay nasoo tuso gurigeedii hore ayeey Nduta isbadashay mar aan dhex sii marayno iyadoo noo sheegtay inay ka cabsi qabto in la soo weeraro, waxaanuna ku qasbanaanay in aan dib ugu celino xeradii aynu ka soo kaxeenay. Qaar badan oo ka mid ah barakacayaasha oo u badan haween ayaa waxa ay walaaca noocaa ah ay la qabaan Nduta. Waxa ay jeclaan lahaayeen inay dib ugu laabtaan guryahoodii haseyeeshee ma ay hubeyn inay ku badbaadi doonaan haddii ay sidaa yeelaan. Dowlada Kenya ayaa horay u sheegtay in barakacayaasha ay nabad iyo badqab ku heli doonaan markii ay guryahooda ku laabtaan, balse hablaha sida Nduta, laguma qancin inay dib ugu laabtaan guryahoodii.
Dadaal aanu ugalnay inaan dowladda ka helno jawaabta arrimahan ayaa mira dhal noqon waayey
Balse waxaa jira waxoogaa horumar ah.
Dhinaca kale ee magaalada Eldoret ayaa waxaan soo gaarnay xaafada Huruma, dadaalo dib u heshiisiineyd ayaa halkan ka soconayay. Qaar badan oo ka mid ah qabiilka Kikuyu-da ee halkan ka qaxay qalalaasihii 2008-dii ayaa iminka dib u soo laabtay...waxayna iminka heleen guryo cusub oo ay u dhiseen dadkii horay u ceyriyay oo ah Kalaanjiinta. Tani waxa ay qeyb ka aheyd hindise ay hay'addaha gargaarka ee Caalamiga iyo dowlada Kenya ay dib u dajinta ku sameynayeen. Esther Wanjiku waa hooyo haysata laba caruur ah, waxay ka mid tahay dadka ka faa'iidaystay barnaamijkan, waxay noo sheegtay inay halkan joogi doonto...
Waxaa jira caaqil maxali ah oo halkan yimid oo si wadajir ah wadahadal noogu qabtay inaga iyo dadkii digaalka uu dhexmaray…waxaan go'aansanay in aan wada fadhiisano oo aan heshiino.
Magacyadena ayaa laqortay si noola siiyo guriyo cusub. Dadkii guriyahooda ka barakacay, intooda badan dib bay usoo labteen. Waxaa jiro kuwo yar oo aan wali soo laaban.
Haseyeeshe dib u heshiisiin dhab ah miyeey ka dhacday magaalada Eldoret? Waa su'aal aan waydiinay Mary Njoki, oo dadaal u gashay in hirgaliyo hanaanka dib u heshiisiinta.
Waxa jira dad isa soo bixiyay oo si tabarucaad ah u qiray in ay galeen dambiyo. Dadku waa diyaar oo qaarkood ayaaba ii diray dadkale si aan ugu wargaliyo in la hayo alaabahoodi laxaday. Dadka qaarkoodna dib ayeeyba u ciliyeen alaabihii ay horay ubililaqeysteen, sababta oo ah waxay u baahan yihiin iscaafis dhab ah.
Waqtigan la joogo waxaa jirta nabad baahsan, balse waxay tijaabo gali doontaa doorashada guud ee soo socota, iyadoo bisha April ee sanadkan ay Maxkamada Caalamiga ee dambiyada ay dhageysan doonto kiisaska Kenyanka.
Shiine: Annagu ma lihin muusig qoran15:27
Waa maxay doorka Qurba-joogta Soomaaliya?29:20
Jaamacad Soomaaliyeed oo Kenya maydad ka qaadaneysa04:14